XULKA MAANTA – Aragti Qaran
Category: XULKA MAANTA
Dhageyso:- DF oo Si deg deg ah uga Jawaabtay eedeyntii Imaaraatka Lacagtii lagu qabtay Garoonka …
Xiisad xoog badan ayaa ka dhex aloosan wadamada Soomaaliya & Imaaraatka Carabta, gaar ahaana waxay xiisadaas mar kale banaanka u soo baxday maalmo ka hor markii lacag cadadkeeda ay ku sheegtay dawladda Faderaalku $9.6Malyan oo Dollar oo lagu waday Boorsooyin…
XOG RASMI AH:- Farmaajo & Kheyre oo ayka tafatay & Farmaajo oo diiday Codsigii Kheyre …
In ka badan 120 Xildhibaan oo katirsan baarlamaanka Faderaalka ee Soomaaliya oo ku shiray goor dhaw mid kamid ah Hotelada magaalada Muqdisho ayaa soo saaray warsaxaafadeed toos ugu socda Madaxweynaha dawladda Faderaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo ay uga hadlayaan xaaladdaha…
Video:- Daawo Gudoomiye oo Markale Afka Furtay & Natiijada Kulankii Farmaajo …
Gudoomiyaha baarlamaanka Somalia Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, ayaa goordhow magaalada Muqdisho kula hadlay warbaahinta kadib markii la hakiyay kulanka baarlamaanka ee maanta lagu madalsanaa. Guddoomiye Jawaari ayaa ka hadlay sababta ka danbeysay in la hakiyo kulanka maanta, waxa uuna sheegay…
Maxaa ka dhaxeeya kutlada badbaadada baarlamanka 2018 iyo badbaadadii 2014?
“Caawa maxaa uga ek Xalay” “Awrka yar wuxuu leeyahay saan-qaadka kan Weyn” “Waa maadeys adduunyadu dadkuna way matalayaan”. Barlamaanka Somaliya, gaar ahaan 5 tii ugu danbeysay waxaa soo maray; khilaaf, is qab-qabsi, buuq, kala qeybsanaan, Mooshino iyo bur-bur ku dhammaan…
Gabadhii Reer Pakistan oo Markii ugu horeysay Gaartay ….
Gabadha abaalmarinta nabadda ee Nobel-ka ku guulaysatay Malala Yousafzai ayaa ku laabatay Pakistan markii u horraysay tan iyo markii ay toogteen malayshiyada Taliban. Yousafzai oo hadda 20 jir ah aadna ugu dooda xuquuqda aadanaha ayuu qof hubaysan madaxa ka toogtay…
Maxaadan ka Ogeen Magaaladda Gaalkacyo & Howlgalkii ….
Ciidamada amniga Gobolka Mudug ayaa maalmahan waxa ay wadeen Howlgallo lagu xaqiijinayo Amniga magaalada Gaalkacyo, kadib markii ay aoo kordheen falalka ka baxsan amniga. Ciidamada ayaa Howlgaladan waxa ay ka sameeyeen dhammaan xaafadaha ay magaalada ay ka kooban tahay, waxayna…
DEG DEG | Aqalka Sare oo War deg deg ah Kasoo Saaray Mooshinkii Jawaari & Xaalka oo Cakiran ….
Golaha Aqalka sare ee Barlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in ay u taag waayeen xalinta ay ka dhax wadeen Golaha Shacabka, kaas oo ku aadan khilaafka cirka isku sii sheeraya ee ka dhax taagan Golaha, oo ka dhashay mooshinkii laga keenay…
Kala dalaalidda Xildhibaanada oo qiimihii ugu Sareeyey gaaray & Jahawareer Siyaasiyadeed oo ….
Xildhibaannada golaha shacabka ayaa maraan waxay isku diyaarinayaan dagaal culus oo Sabtida ka dhex dhaca xaruntooda magaalada Muqdisho. Iyadoo ay jirto kala aragti duwanaansho xildhibaannada ah ayaa lasoo sheegayaa in markaan xildhibaannadu doonayaan fowdo iyo dagaal ka dhaca xaruntooda. Ilo…
Xildhibaanada kale oo Hanjabaad & digniin isugu daray Jawaari & Xaalka oo ….
Xildhibaanada Mooshinka ka geeyay Gudoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa ka hor yimid go`aankii ka soo yeeray Gudiga Badbaadada Golaha shacabka ee ku aadanay in uu jabay ama buray Mooshinka ka dhanka ahaa Gudoomiye Jawaari,…
Akhriso: Xildhibaanada taageersan Guddoomiye Jawaari oo soo saaray qoraal cusub oo ku saabsan arrinta Mooshinka
Sida aan wararkeena hore ku sheegnay waxaa saacadihii ugu danbeeyay magaalada Muqdisho ka socday kulamo gaara oo u dhexeeyay Xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka gaar ahaan kuwa taageersan Guddoomiye Jawaari. Kulanka ayaa ka dhacay Xarunta Villa Hargeysa waxa ayna Xildhibaanadu…